Koox qaxooti ah oo xadka Finland ka soo tillaabaya si ay Sweden iskaga dhiibaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Koox qaxooti ah oo Sweden lug ku soo galaysa sannadkii 2015. sawir: Drago Prvulovic/TT
Koox qaxooti ah oo xadka Finland ka soo tillaabaya si ay Sweden iskaga dhiibaan
Afhayeen: waxa aan rajeynaynaa Sweden in ay naqaabisho
La daabacay tisdag 22 augusti 2017 kl 09.54
Koox magangeliyo doon ah oo Finland ku sugan ayaa qorsheynaya in bilowga bisha september ka soo tillaabaan xadka Sweden iyo Filand si ay magangeliyo uga dalbadaan Sweden.
Afhayeen u hadlay kooxdaan qaxootiga ah ayaa sheegay in tiradooda gaarayso boqolaal oo laga yaabo xataa in ay gaarto kun iyo ka badan.
Arrintan ayaa boliska xadka iyo hay’adda socdaalka Migrationsverket haddda u sii diyaar garaoobayaan
– Ha, waa la soconaa xogta arrintan, waana u sii kuurgeli doonaan wax ka jira xogtaan, ayey tiri Lisa Danling oo warbahinta u qaabilsan hey’adda Migrationsverket.
– Haddii ay dhacdo in tiro badan magangeliyo ka dalbato halkan heegan ayaan u nahay. Maxay ka micno tahay? Waxay ay ka micno tahay in aan haysano hawl-wadeenadii qaabili lahaa oo qaban lahaa dalabyadooda magangeliyo, ayey tiri.
Todobadkii ugu dambayey ayaa aaladaha bulshada iyo wargeysyo ka soo baxa Finland lagu baahiyey war sheegaya in magangeliyo doon u badan dad Iraaq ka yimid ay qorsheynayaan todobaayada soo socda in ay ka soo tillabaan xadka Finland iyo Sweden ee Haparanada/Torneå.
Nuor Dawood ayaa ah afhayeenka kooxda magangeliyo doonka ah:
– Waxaa dhaci karta tiradeena in ay noqoto inta u dhaxaysa boqolaal illaa kun ruux, xataa way dhaci karta in aan ka badnaano. Marka hore waxa aan la xaajooneynaa boliska xaduuda ee Finland si ay noogu ogalaadaan in aan lug uga tillaabno xaduudda oo aan lug ku galno Sweden si aan magangeliyo waddankas uga dalbano, ayuu yeri Nuor Dawood.
Sida uu sheegay tillabada ay damacsan yahiin in ay qaadaan ayaa la xiriirta sidii ay ku muujin lahaayeen saluuga ay ka qabaan siyaasadda magangeliyada ee Finland ay kula dhaqanto qaxootiga ka yimid dalka Iraaq kuwaas oo loo diido magangeliyo kadibna dalkas laga masaafuriyo.
– Waxa aan rajeyneynaa ayuu yeri Sweden in ay na qaabili doonto oo nasiin doonto deganaansho .
Caadiyan xaduudka labada dal kala qaybiya ee Haparanda iyo Torneå ayaa ah mid furan.
Boliska xaduudaha Sweden ayaa ayaguna sheegay in baaritaan ugu jiraan xogtaan la xiriiirta xaqootiga doonaya in ay xaduudda ka soo tillaabaan.
Lisa Danling oo iyada u qaabilsan warbaahinta hey’adda Socdaalka, waxa ay sheegtay dalab kasta oo magangeliyo in goonidiisa loo qiimaynayo oo ay dhaci karto in ka reebitaan loo sameeyo laakiin ay mar kasta xeerka laga duulaya uu yahay xeerka heshiiska Dublin oo micnahiisa yahay qofkii horey magangeliyo uga dalbaday Finland in dib loogu celinayo waddankas.
– Caadiyan waxa ay tahay qofka haddii uu horey magangeliyo uga dalbaday dal kale ay tahay dalkas midka tijaabinaya dalabkiisa magangeliyo, ayey tiri Lisa Danling.